ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကို သင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်နေဆဲဆိုရင် ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပါ - Lifestyle Myanmar
သင့်ပါတနာမှာ သင်မကြိုက်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ ရှိနေတယ်၊ ဒါကို သင့်အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားရင် ဒါကမကောင်းတဲ့ အကြံအစည် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အခြားလူတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲပေးလို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုကြိုးစားခြင်းက ဆန့်ကျင်ဘက် သက်ရောက်မှုတွေတောင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားလေလေ relationship ကမဖြစ်နိုင်တာတွေ ပိုများလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ?
၁။ လူအများစုက အပြောင်းအလဲကို ကြောက်ကြပါတယ်
လူတွေက သူတို့မလိုအပ်ဘဲ ပြောင်းလဲတာ ရှားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဇဆိုတာ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နေရင်တောင် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ တွန်းအားပေးမယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ဆိုးကျိုးသာ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဆန္ဒအလျောက် ပြောင်းလဲချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကျိန်းသေပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂။ သူတို့ဘာသာ ပြောင်းလဲမှ ရတာပါ၊ သင်ပြောင်းလဲပေးလို့ မရနိုင်ပါဘူး
အခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ကို ဘယ်သူကမှ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲပေးလို့မရပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီပြောင်းလဲမှုက passive မဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။ သင့်ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းမွန်ပါစေ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုကောင်းအောင် ပြောင်းလဲပေးဖို့ ကြိုးစားခြင်းက ရေရှည်မှာ သူတို့ကိုသာ ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူတို့ကိုယ်တိုင် လှုံ့ဆော်မှု ရှာမတွေ့ရင် ဘယ်သူမှ ပြောင်းလဲပစ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး
လူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ မပြောင်းလဲချင်ဘူးဆိုရင် ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။ သင့်ကို သူဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ သင့်ရဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်စေချင်ချင် သူကိုယ်တိုင်က တိုးတတ်ချင်မှာ မဟုတ်ရင် ပြောင်းလဲလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၄။ လူတိုင်းက ကိုယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်ခံရဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်
သူအလုံအလောက်ကောင်းတယ်လို့ သင်မထင်ဘူးဆိုရင် သင်ဟာ သူနဲ့အတူနေခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို အကျိုးယုတ်စေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ခံရဖို့အတွက်နဲ့ ဘယ်သူမှ မပြောင်းလဲသင့်ပါဘူး။ သူ့ကို ကိုယ့်အတွက် perfect ဖြစ်နေစေဖို့ ပြောင်းလဲစေချင်တာက တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကို နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ရှာနိုင်တာကြောင့် သူဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို ချစ်ပေးမယ့် လူတစ်ယောက်ကို ရှာခွင့်ပြုလိုက်ပါ။
၅။ သူ့ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့က သင့်အလုပ်လို့ ခံစားနေရရင် သင်ဟာ ကျရှုံးပြီးသားပါ
ဒီအကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြရအောင်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် လုပ်တာက သင့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုတွေအတွက် ကိုယ့်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ဘယ့်သူကိုမဆို “ကယ်တင်ဖို့ “(သို့) “သူတို့ဘဝကို ပြောင်းလဲဖို့ “တာဝန်ရှိတယ်လို့ မခံစားရသင့်ပါဘူး။
၆။ သင်ဟာ သူဘယ်သူလဲဆိုတာကို နက်ရှိုင်းစွာ သိပြီးသားပါ
လူတွေက သင်သူတို့နှင့်အတူ ရှိနေတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းရဲ့ အခိုက်အတန့်တိုင်းမှာ သူတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာကို သင့်ကိုပြောပြနေပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်း၊ စကားလုံးတိုင်း၊ တုံ့ပြန်မှုတိုင်းက information တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ “အစစ်အမှန်”က အရာအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတယ်၊ သင်လုပ်ရမယ့်အရာက ပစ္စည်းကောင်းရဖို့ အလွှာတွေကို ပြန်ခွာချရမယ်လို့ ထင်နေရင် သင်ဟာ ငြင်းကွယ်ခြင်းမှာ ဖြစ်နေတာပါ။ သူက သူဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို တစ်လျှောက်လုံး ပြခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မြင်တဲ့ အခြားအရာတစ်ခုက သင်ဖြစ်ချင်နေတာတွေပါ။
၇။ တရံတရံ လူတွေက သဟဇာတမဖြစ်ပါဘူး၊ အဲ့ဒါက အဆင်ပြေပါတယ်
သင်နဲ့အတူနေတဲ့လူကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဘာ့ကြောင့်ခံစားရသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါ။ ဝါသနာ၊ စရိုက်ချင်း မတူညီလို့လား? ပြောဆိုဆက်ဆံပုံ မတူကြလို့လား? ကွဲလွဲနေတဲ့ တန်ဖိုးတွေ ရှိနေလို့လား? အဲ့လိုဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သဟဇာတမဖြစ်နိုင်ရုံလေးပါ။ ဘယ်သူမှပြောင်းလဲဖို့ မလိုပါဘူး။ သင်ဟာ သီးခြားနည်းလမ်းတွေကို သွားဖို့သာ လိုအပ်ပြီး သင့်နဲ့ တကယ်သဟဇာတဖြစ်တဲ့ သူကိုသာ ရှာဖို့လိုပါတယ်။
၈။ သူက သင့်အတွက် ပြောင်းလဲချင်ရင် သူ့ဘာသာ လုပ်ပါလိမ့်မယ်
လူတစ်ယောက်အား သူ့ဘာသာသူ ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းက သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးထဲမှာ အခက်အခဲသာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူက သင့်ကိုတကယ်ချစ်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လိုရင် သင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူ ဖြစ်လာစေဖို့ သူ့ဘာသာ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
၉။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားခြင်းက မကျေနပ်ချက်ကိုသာ တည်ဆောက်ပေးပါတယ်
သူတို့ပါတနာက သူတို့ကို ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ ဘယ်သူမှ မခံစားချင်ကြပါဘူး။ သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လှုံ့ဆော်တယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်မှာ ဖြစ်သော်လည်း သူက အဲ့လိုမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စကို မျှော်လင့်ထားတာဟာ ကိုယ့်အတွက်ပူလောင်ပါတယ်။ သူ့အကျင့် ၊ သူ့ဗီဇကို ကိုယ်က မကြိုက်ဘူးဆိုရင် အစကတည်းက သံယောဇဉ်မတွယ်မိအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။